Wadaadkii Saaxiibkiis Dilay Iyo Cuqubadii Ku Dhacday! | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Taariikhda Degmada Taleex
Maxamuud Axmed Muuse, February 19, 2019
Waxaa jiray laba nin oo muddo dheer saaxiibbo ahaa. Waxa ay ahaayeen labaduba laba nin oo wadaaddada akhwaanka ahaa. Waa isla socon jireen, wax ayna ahaayeen laba saaxiib oo la isku yaqaannay. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa mid labadooda ka mid ah, waxa uu xiriir la yeeshay qolooyin sirdoon ah, oo waddamada deriska ah ka mid ah. Kolkaas buu isku beddelay jaajuus mushaar ku qaata tiftifka wadaaddadaas uu ka mid ahaa. Ninkani, waxa ay shaqadiisu noqotay in uu wadaadda dabagalo, oo warkooda keeno, si kuwa madaxda ah ee danaha laga leeyahay, loo laayo.Shaqadaas ayuu in muddo ah ka shaqeynayey, saaxiibkiisna ma oga hawsha uu ku jiro.
Sidii uu hadba wadaad war uga geynayey, ayuu markii dambe, inta iimaankii ka tagay, waxa uu ka mid noqday kuwa wadaadda khaarijiya, halka markii hore uu ka ahaa oo keliya farmuuqe.
Maalin maalmaha ka mid ah, ayaa shaqadiisii waxa ay soo gashay wadaadkii saaxiibkiis ahaa, oo aad loogu yaqaannay gaalo neceybka, iyo wacdiyo kulkul oo uu marar qaar ka jeediyo masaajidda. Ninkaan oo ay hawlihiisu ka mid ahaayeen khaarijinta wadaaddada noocaas ah, ayuu maalin maalaha ka mid ah la ballamay wadaadkii saaxiibkiis ahaa. Gurigigiisii ayuu inta ugu yimid oo la qadeeyey, galabtiina la casaryeeyey, ayaa maqribkii markii la gaaray, gurigiisa hortiisa bistoolad madaxa kala dhacay, halkaasina uu ku geeriyooday.
Waxa uu dilay ninkii saaxiibkiisa ahaa, waxa uuna ku dilay gurigiisii hortiisa, oo carruurtiisii iyo reerkiisa uusan ka fogeyn, isaga oo weliba ilaa maanta oo dhan uu u martiqaadnaa, oo uu cuntadiisii cunayey.
Maalintaas wixii ka dambeeyey, waxaa ku dhacay ninkii cudur ilaa iyo hadda waxba laga qaban waayey. Ninkii waxa uusan ceshan karin kaadida, menida iyo saxarada, isaga oo soconaya ayeyna ka daadanayaan!
Ninkii, markii arrintan uu caalwaayey ay ku dhacday, ayuu reerkii iyo carruurtii inta u yimid, u sheegay in uu abbahood dilay ee ay cafiyaan, isaga oo xaalo badan farta ka saaray, isla markaasina noloshooda iyo masruufkooda dusha saartay. Laakiin, si kasta oo ay u cafiyeen, xag Alle ayaan weli laga cafin, oo sidii ayey ummuurtii u haysataa!
Tags: Wadaadkii Saaxiibkiis Dilay Iyo Cuqubadii Ku Dhacday!
Next post Filashadii Shacni Foorar Baa u Dambeeyay!
Previous post Abaalkii ugu Quruxda Badnaa oo Ay Laba Wiil oo Saaxiibo Ahaa Isku Galeen!